स्टिफन हकिङदेखि झमककुमारी सम्म : शारीरिक अशक्तता भएकाहरुको प्रेरक सफलता, जसले केही गर्न हौसला दिन्छ
शारीरिक अशक्तता भएकाहरु युगकै खतरनाक व्यक्तिसम्म बने
लोकपथ संवाददाता मंसिर १७, २०७५ | सोमबार
खुट्टै नभएको व्यक्तिले सगरमाथा चढ्यो भन्दा अचम्म लाग्दैन ? अनि आँखा नदेख्ने व्यक्तिले किताब लेख्यो भन्दा नि ? पूरै शरीर नचल्ने व्यक्ति युगकै सबैभन्दा खतरनाक वैज्ञानिक हुनु आफैमा आश्चर्यलाग्दो कुरा छैन र ?
शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई देख्नासाथ ‘बिचरा’ भन्ने हाम्रो संवेदनालाई यी कुराहरु नौलो लाग्न सक्छन् । अचम्मको लाग्न सक्छन् । त्यस्तै यी पात्रहरु कुनै ‘फ्यान्टासी’ चलचित्र वा किताबका पात्र जस्तो पनि लाग्न सक्छन् जब कि यी व्यक्तिहरु ‘रियल’ हुन् । सबैसँग कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक अशक्तता छ र सबैले कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई चिर्दै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।
कोही जन्मिदै शारीरिक रुपमा अशक्त थिए, कोही दुर्घटनामा परेर अशक्त हुन पुगे । तर, शारीरिक अशक्तताले उनीहरुको सपनामा अङ्कुश लगाउन भने सकेन । न उनीहरुले आफ्नो कमजोरीलाई जीवनमा हावी हुन दिए न त पुर्पुरो ठोक्दै बिलौना गाएर समय बर्बाद गरे । बरु, आफ्नो ‘समस्या’लाई ‘शक्ति’ मा परिणत गरे । र, सबैका निमित्त उदाहरण बने ।
यस्ता केही व्यक्तिहरु यस प्रकार छन् :
स्टिफन हकिङ विश्वप्रसिद्ध भौतिकशास्त्री, लेखक र प्रोफेसर हुन् । उनले विशेष गरेर भौतिक शास्त्र र ब्रह्माण्ड विज्ञान सम्बन्धि विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेका छन् ।
‘टायम मेसिन’ को सहायतामा वर्तमानबाट आफ्नो विगत वा भविष्यमा जान सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि उनैले विकास गरेका हुन् ।
विश्वका सुप्रसिद्ध बौद्धिक व्यक्तित्त्वहरुमा उनको नाम पनि आउँछ । धेरैले उनको यो उपलब्धिलाई ‘चमत्कार’ पनि मान्ने गर्छन् किनकि स्टिफनलाई ‘एम्योट्रोफिक ल्याटेरल स्क्लेरोसिस’ नामक नशा सम्बन्धि रोग थियो जसकारण उनको सम्पूर्ण शरीर प्यारालाइज्ड थियो । उनी न बोल्न सक्थे न त हिँडडुल गर्न नै ।
उनले भन्न चाहेको कुरा व्यक्त गर्न र हिँडडुल गर्नका निमित्त विशेष किसिमको यन्त्र बनाइएको थियो । जसको सहायताले उनले क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयमा पढाउनेदेखि आफ्नो खोजअनुसन्धान गर्ने र पुस्तक लेख्ने सबै काम गर्ने गर्थे ।
यसरी २१ वर्षको उर्जाशील उमेरदेखि शरीर कुँजिएपनि यसले स्टिफनलाई खोज अनुसन्धान गर्न, विज्ञान क्षेत्रमा अमिट छाप छोड्नबाट रोक्न सकेन ।
हेलेन केलर डिग्री प्राप्त गर्ने विश्वकै प्रथम देख्न र सुन्न नसक्ने व्यक्ति हुन् । जन्मिदा सामान्य नै जन्मिएकी उनले डेढ वर्षको उमेरदेखि अकास्मात् देख्ने र सुन्ने शक्ति गुमाइन् ।
देख्न र सुन्न नसक्ने उनलाई पढाउन लगभग असम्भव जस्तै लागिरहेका बेला अन्नी सुलिभानले सो जिम्मेवारी लिइन् । उनले हेलेनको ‘महसुस’ गर्ने सेन्सलाई प्रयोग गरेर, कुनै शब्द उच्चारण गर्दा मुख चल्ने तरिका, वस्तुलाई छोएर चिन्ने क्षमताको विकास गर्दै उनलाई पढाइन् ।
हेलेनले पनि आफ्नो सिक्ने चाहनालाई कहिल्यै मर्न दिइनन् । अन्ततः उनी सफल लेखक, प्राध्यापक र राजनीतिक अभियान्ता बन्न सफल भइन् ।
फ्रान्कलिन डि रुजवेल्ट
फ्रान्कलिन अमेरिकाका वकिल साथै ३२ औं राष्ट्रपति हुन् । उनको नाम जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिंकन जस्ता उत्कृष्ट अमेरिकन राष्ट्रपतिसँगै लिइन्छ किनकि रुजवेल्ट दोस्रो विश्वयुद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्तो विकराल अवस्थामा राष्ट्रपति बनेका थिए ।
उनी राष्ट्रपति बन्नुअघि नै पोलियोबाट संक्रमित थिए । रुज्वेल्टको कम्मरमुनिको भाग चल्दैनथियो । शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकको नेतृत्व हातमा लिनु आफैमा निकै शाहसी र आश्चर्यलाग्दो कुरा हो ।
यद्यपी उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा धेरैलाई थाहा थिएन । पोलियोबाट संक्रमित उनी सकेसम्म आफ्नो रोग लुकाउन चाहन्थे ताकि कसैले कमजोर नसम्झियोस् । त्यसैले, उनका प्राय तस्वीरहरुमा कम्मर माथिको भाग मात्र देख्न सकिन्छ ।
उनको नेतृत्वलाई जनताले रुचाएर नै होला सन् १९३३ देखि १९४५ सम्ममा उनले ४ पटक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाए । उनी राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकामा धेरै परिवर्तनहरु महसुस गरियो, आर्थिक रुपमा देश झनै सुदृढ हुँदै गयो ।
शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिले बौद्धिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेर पहिल्यैदेखि कायम ‘स्टिरियोटाइप’लाई तोड्दै गर्दा यस्ता केही शाहसी व्यक्तित्व पनि छन् जसले शारीरिक क्षमतालाई प्रस्तुत गर्दै बलियो उदाहरण दिएका छन् । वा भनौ उनीहरु आफै उदाहरण बनेका छन् ।
यस्तै एक उदाहरणीय पात्र हुन् अरुणिमा सिन्हा । उनी भारतीय नागरिक हुन् ।
हिमाल चढ्न खुट्टा होइन आत्मबल भए पुग्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेकी छिन् उनले । अरुणिमा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो शारीरिक अशक्तता भएकी महिला हुन् । उनको एउटा खुट्टा छैन ।
उनी जन्मिदै यस्तै जन्मिएकी भने होइनन् । रेलमा यात्रा गर्दैगर्दा केही व्यक्तिहरुले उनको सुनको सिक्री चोर्न खोजे । रोक्ने प्रयास गर्दा उनीहरुले अरुणिमालाई कुदिरहेको रेलबाट ढकेलिदिए । अचेत अवस्थामा रेलको ट्रयाकमा लडिरहँदा ४९ वटा रेल उनको माथिबाट कुद्यो ।
त्यो दर्दनाक घटनाबाट बउरिएपछि उनको जीवन नै फेरियो । उनले विश्वकै सर्वोच्च शिखरको चुचुरो ‘कृत्रिम’ खुट्टाकै सहायताले टेकिन् । अहिले उनी राष्ट्रिय स्तरकी भलिबल खेलाडी पनि हुन् ।
नृत्यको परिभाषा के ? हातपाउ लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गलाई संगीतको तालमा लच्काउनु, मर्काउनु । प्राय सबैको उत्तर यसैसँग धेरथोर मिल्न जान्छ । तर, नाच्नलाई खुट्टै बाँकी रहेन भने ?
करियरमा फूलस्टप ?
सुधा चन्द्रनले यही पुष्टि गरेकी छिन् ।
३ वर्षको हुँदादेखि नाच्न शुरु गरेकी सुधा ‘भरतनाट्यम’ डान्सर हुन् । आफ्नो जीवन नै नृत्यमा समर्पण गरेकी सुधाले १६ वर्षको कलिलो उमेरमा एक बस दुर्घटनामा परेर आफ्नो खुट्टा गुमाइन् । तर, उनले आफ्नो नृत्यलाई माया मार्न सकिनन् ।
दुर्घटनापछि पहिलो पटक स्टेजमा नाच्दा उनको प्रस्तुति देखेर सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । भोलिपल्ट पत्रपत्रिकामा छापियो, ‘बिना खुट्टा गरिएको माइल यात्रा’।
यसरी कृत्रिम खुट्टाको सहारामा उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुति दिइसकेकी छिन् । त्यसैगरी, विभिन्न टेलिभिजनका कार्यक्रमहरुमा अभिनय गरिसकेकी उनले आफ्नै जीवनकथामा आधारित चलचित्रमा समेत अभिनय गरेकी छिन् ।
जन्मिदै नसा सम्बन्धि रोग लिएर जन्मिएकी झमक अन्य बालबालिका भन्दा केही फरक थिइन्, शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा । उनको हात चल्दैनथियो, खुट्टा पनि हिँड्न सक्ने अवस्थामा थिएन, प्रष्ट बोल्न पनि नसक्ने अनि मानसिक विकास पनि सुस्त ।
यी सबै अशक्तताका कारण उनी न त स्कुल जान पाइन् न त उनले आफ्ना भाइबहिनी जस्तो व्यवहार नै पाइन् ।
झमकले सुनेर सिकिन्, हेरेर सिकिन्, देखेर सिकिन् अनि महसुस गरेर सिकिन् । माटो उनको कापी भयो र ढुङ्गा उनको कलम । बहिनीका कापी, किताब चोर्दै, माग्दै उनले अक्षर चिनिन्, शब्द बनाउन जानिन् अनि क्रमश वाक्य, अनुच्छेद हुँदै अन्त्यमा सिङ्गो पुस्तक नै रचना गरिन् । ‘
जीवन काँडा कि फूल’ नामक आत्मकथा मार्फत् मदन पुरस्कार जितेकी झमकले केही थान कविता संग्रह पनि प्रकाशन गरेकी छिन् । आफ्नो शाहस र अद्भुत क्षमताको कदरस्वरुप राष्ट्रपति लगायत राष्ट्रका सम्माननीय व्यक्तित्वको हातबाट पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गरेकी छिन् ।
जोरपाटीबाट ५ लाख ३१ हजार नगदसहित १३ जुवाडे पक्राउ
पत्रकारकी स्वास्नी सोझी थिई । लप्पनछप्पन नजानेकी । अनुहारमा ढकमक्क तिलकोठी थिए । सोझो पारा की । चरित्रवा...
जेठ २८, २०७५ | सोमबार
अरुणा शाही ठकुरी, नेपालकी उदीयमान भलिबल खेलाडी हुन् । चितवन टाइग्रेसकी ‘टाइग्रेस’ । हुन ...
असोज २३, २०७५ | मंगलबार
‘हामी समाजका सह–चालक हौं’
‘भन्नेहरु पद्य कविताको युग गयो भन्छन्, तर यी तन्नेरीले छन्द कविताको नयाँ युग लिएर आएका छन् । ...
तराईका ‘हिरो’ उर्फ नाजिर हुसेन
काठमाडौं । काठमाडौं खाल्डोलाई आफ्नै चिन्ता छ । देशको राजधानी काठमाडौंको राजनैतिक पहुँच काठमाडौं बाह...
जेठ २६, २०७५ | शनिबार
सेल्फी : केही सनसनीपूर्ण घटना
“ए नानी खै एउटा सेल्फी खिच् न । सबैजना भाको” दशैँमा आफ्ना नातिनातिनीलाई टीका लाइदिँदा थो...
जेठ २९, २०७५ | मंगलबार